အပြေးနှင့်စွဲ - လှုပ်ရှားမှုအခြေပြု anorexia (၂၀၀၉) ကြွက်၏ပုံစံတွင်မိုးရွာသွန်းမှုရုပ်သိမ်းခြင်း - Your Brain On Porn
လှုပ်ရှားမှု-based anorexia (2009) ၏ကြွက်မော်ဒယ်အတွက်ဆုတ်ခွာ precipitated: အပြေးနှင့်အစွဲ
ပြုမူနေ neuroscience ။ 2009 Aug;123(4):905-12. doi: 10.1037/a0015896.
Kanarek RB, D'Anci KE, Jurdak N ကို, WF Mathes.
စိတ်ပညာဌာန, Tufts တက္ကသိုလ်, 490 ဘော်စတွန်ရိပ်သာလမ်း, Medford, MA 02155, USA ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
လေ့ကျင့်ခန်းသည်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေသည်၊ ကြွက်သားများနှင့်အရိုးများကိုခိုင်မာစေသည်၊ အာရုံကြောကျဆင်းမှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီးသုခချမ်းသာကိုခံစားစေသည်။ အစွန်းရောက်သည့်အခါလေ့ကျင့်ခန်းသည်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။ လေ့ကျင့်ခန်း၏စွဲလမ်းမှုအလားအလာကိုအကဲဖြတ်ရန် ၁.၀ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် naloxone ထိုးဆေးကိုသောက်ပြီးနောက်ဆေးကြောခြင်းလက္ခဏာများကိုတက်ကြွ။ မလှုပ်မရှားအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ တက်ကြွပြီးမလှုပ်မရှားသောကြွက်များကိုတစ်နေ့လျှင် ၂ နာရီသို့မဟုတ် ၂၄ နာရီစားသုံးရန်ပေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်မလှုပ်မရှားဖြစ်နေသည့်ကြွက်တစ်စုသည်စားနပ်ရိက္ခာအကန့်အသတ်ရှိသောတက်ကြွသောကြွက်များကပြီးခဲ့သည့်နေ့ကစားသုံးခဲ့သည့်ပမာဏပမာဏကိုတွဲဖက်ကျွေးမွေးခဲ့သည်။
တစ်နေ့လျှင်တစ်နာရီလျှင်အစာကျွေးသောကြွက်များသည်အစားအစာစားသုံးမှုကိုလျော့နည်းစေပြီးကိုယ်အလေးချိန်ကျသည်။ ထို့အပြင်အစားအစာကိုအကန့်အသတ်ရှိသောတက်ကြွသောကြွက်များကဘီးပြေးခြင်းကိုတိုးများစေသည်။ ပြေးနှုန်းနှင့်ပြင်းထန်သောဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများအကြားတိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်မှုရှိသည်.
တက်ကြွသောအစားအစာကိုအကန့်အသတ်ရှိသောကြွက်များသည်ထုတ်ကုန်များအများဆုံးလက္ခဏာများကိုပြသခဲ့သည်။ အနိမ့်ဆုံးထုတ်ယူသောလက္ခဏာများကိုသာမလှုပ်မရှားကြွက်များတွင်တွေ့ရသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် endogenous opioid peptides အတွက်လေ့ကျင့်ခန်း - သွေးဆောင်တိုး opiate မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးဆင်တူတဲ့ထုံးစံ၌ပြုမူသောအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။